Wararka warshadaha - Wararka - Shenzhen Wudongfang Dhaqanka Isgaarsiinta Co., Ltd. - Page 1
Hoyga > Wararka > Wararka warshadaha
Ma ogtahay taariikhda Kabaha Baleedka?
Qoob-ka-ciyaarka iyo dhiciska waa lammaane dabiici ah, kabaha baleedkana waa tusaale naadir ah. Kabaha baleedka ee baalashka leh ayaa lagu yaqaanaa qaab-dhaqameed aan waqti lahayn, xarrago iyo fure-fure u ah, taas oo laga yaabo inay tahay in lagu haysto labis kasta oo gabar Faransiis ah.
Waa Maxay Tie-dyeï¼Ÿ
Shiinaha, Hindiya, Jabbaan, Cambodia, Thailand, Indooniisiya, Maleesiya iyo dalal kale ka sokow waxay kaloo leeyihiin farsamo gacmeedyo loo yaqaan 'tie-dye'. Sannadihii 1970-yadii, dyeye-yeelku wuxuu noqday farsamo gacmeed caan ah, oo si ballaadhan loogu adeegsado dharka, xarkaha, ka laalaadda gidaa......
Sidee Ballet Tutu asal ahaan iyo horumar u yeeshay?
Marka laga hadlayo baleetiga, qof walbaa wuxuu caan ku yahay "Swan Lake", muuqaalka swan cad, muuqaalka qoob-ka-ciyaarka quruxda badan, iyo midka caadiga ah ee "Four Little Swans". Goonnada faashaddu way gaabnayd oo way gaabnayd mar kale, oo ka hooseysa jilibka illaa jilibka dushiisa. Horumarka guud......
Gabar kasta waxay umuuqataa inay leedahay riyo amiirad. Waxay rabtaa inay xidhato dharka buluuga ah ee Elsa, waxay doonaysaa inay xidhato dharka cad ee arooska markay guursato, waxayna doonaysaa inay xidhato toobiye midab leh oo midab leh.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa guusha buuxda ee ka soo baxday Qoob-ka-ciyaarka Qoob-ka-ciyaarka 6aad ee Wuhan iyo Bandhigga Qalabka Qoob-ka-ciyaarka
Laga soo bilaabo 14-kii Abriil ilaa 17-keedii, 2021-kii, Bandhiggii 6aad ee Wuhan ee Dharka iyo Qalabka Qalabka Qoob-ka-ciyaarka waxaa lagu qabtay Hall B5 / B6 ee Wuhan International Expo Center wuxuuna ku dhammaaday si guul ah.
Dhowr qaabab waaweyn oo naqshadeynta dharka qoob-ka-ciyaarka
Naqshadaynta dharka qoob-ka-ciyaarka ayaa raacaya jihada qiimaha iyo astaamaha farshaxanka ee lagu soo koobay qaabka iyo nuxurka qaabka qoob-ka-ciyaarka. Dharka qoob-ka-ciyaarka waa in lagu daraa shaqooyinka qoob-ka-ciyaarka, muujiya fikradaha hal-abuurka ah ee gaarka ah iyo raadinta farshaxanka, oo......